‘बर्षा मौसममा पनि मोटर चढ्ने दिन कहिले आउला ?’ « Chhahara Online
ठाउँ – ठाउँमा पहिरो लडेको छ, भने विच वाटोमा रुख समेत ढलेका छन्
झुपु क्षेत्री बबई - ४ आश्विन २०७७, आईतवार
हातमा कोदालो, फरुवा, बेल्चा लिएर घरबाट निस्के अनि बाटोमा आएर बाटो बनाउने काममा सवै गाउँले सक्रिय भए । शनिवार बबई गाउँपालिका वडा नं. ५ जलुके गाउँका स्थानिय प्रत्येक घरबाट एक जना आएर बर्षामा विग्रेको मोटरबाटो बनाउन व्यस्त थिए ।
कसैले खन्न त कसैले माटो, ढङगा मिलाई रहेको दृश्य देखिन्थ्यो । बर्षाका मोटरबाटो विग्रेर कुनै स्थानमा त मान्छे हिड्न पनि समस्या परेकाले बाटो मर्मत गर्न स्थानिय सक्रिय भएका हुन् । जव बर्षा मौषम सुरु हुन्छ, तव हरेक बर्ष यहाँका स्थानिय मोटर चढ्नबाट बञ्चि हुन्छन । बर्षामौषममा पनि गाउँसम्म मोटर सञ्चालन हुने मोटरबाटो नभएर काम चलाउ मात्र मोटरबाटो हुदा यहाँ स्थानिय समस्यामा परेका हुन् । मोटरबाटो विग्रदा करिब २ किलो मिटर हिडेर बगरपुर गएर मोटर चढ्ने बाध्यता रहेको छ ।
जब गिट्टी, बालुवा, ढुङगा खुल्छ तब स्थानीय सरकार र ठेगदार सलबलाउछन् । तर बर्षा मौषममापनि मोटर चढ्न पाउने मोटरबाटोको निर्माण अझैसम्म बन्न सकेको छैन् । एक यूबा संयोग भण्डारीले भने करौडौ राजस्व उठने ठाउँमा राजस्व उठाउँदा राज्य ज़ुरूक्क उठने तर हामीलाई भोट बैंक र प्रयोगसाला बनाउने काम मात्र भयो, हामीलाई राज्यले विकासबाट बञ्चित बनाउदा निकै दुख लागेर आउँछ ।
बबई गाउँपालिकाका विभिन्न वडाका गाउँ गाउँमा अझै यस्तो समस्या रहेको छ । अन्य समयमा मोटर चल्ने तर बर्षामौषममा चल्न नसक्ने बाटो हुदा स्थानियहरु समस्यामा परेका छन ।
बबई गाउँपालिका वडा नंं. ७ मलईको मोटरबाटो, वडा नं. १ जौबारी हुदै गंगते मोटरबाटो, कप्ताने सिमलकुना मोटरबाटो नामको मात्र मोटरबाटो रहेको छ ।बर्षा मौषममा यि मोटरबाटोहरु थप्प हुने गर्दछन् । मोटरबाटो नचल्दा बजार सम्म आवत जावत गर्न पैदल हिड्नु पर्ने बाध्यता रहेको छ ।
यस्तै विरामी पर्दा अस्पताल सम्म पुराउन बोकेर लैजानु भन्दा अरु कुनै विकल्प छैन् । ति गाउँका स्थानियहरु भन्छन् ‘बर्षामौषममा पनि मोटर चढ्ने दिन कहिले आउला ?’
ढोलपुर देखि मलई जोड्ने मोटरबाटो अवस्था नाजुक रहेको छ । मोटरबाटो बनेको करिब १५ बर्ष जति भईसक्यो तर अझै सम्म मोटरबाटोको स्तरोन्नती हुन सकेको छैन् ।
मोटरबाटो अहिले खोलामा परिणत भएको स्थानिय बताउछन् । ठाउँ ठाउँमा पहिरो लडेको छ भने विच वाटोमा रुख समेत ढलेको स्थानिय गोविन्द परियारले बताए ।
हरेक बर्षको बर्षामौषममा मलईका स्थानिय जोखिमपूर्ण यात्रा गर्दै वडा, गाउँपालिका तथा बजार आउनु पर्ने बातध्यता रहेको छ ।